यौन दुर्व्यवहारको दुःस्वप्नबाट बचाउने कुकुर :: द न्यूयोर्क टाइम्स :: Setopati
द न्यूयोर्क टाइम्स काठमाडौं, माघ १०
ग्रेस फ्रेन्च र बेन्ट्ले। तस्बिर: न्यूयोर्क टाइम्स
ग्रेस फ्रेन्चले आफ्नो 'प्यारो' साथी बेन्ट्लेलाई सानैदेखि तालिम दिएकी थिइन्। त्यो सानोतिनो करतब देखाउने, अह्राएको काम गर्ने वा बगैंचा डुल्दा सँगसँगै हिँड्ने सामान्य तालिम थिएन।
मिसिगनकी ग्रेसलाई आफूमाथि भएको यौन दुर्व्यवहारको दुःस्वप्नले हरेक रात झस्काउँथ्यो। यस्तो लाग्थ्यो, मानौं त्यो यौन दुराचारीले उनलाई तानेर रसातलमा लैजाँदैछ।
उनी सपनामै निसास्सिन्थिन्। असिन–पसिन हुँदै ब्युँझन्थिन्।
यस्तो बेला जब उनको आँखा खुल्थ्यो, अन्धकार कोठामा आफूलाई एक्लै पाउँदा उनी झन् बढी कहालिन्थिन्।
ग्रेस चाहन्थिन्, हरेक रात सपनामा कहालिन थाल्दा एक्लो अँध्यारो कोठामा कोही होस्, जसले उनलाई सपनाबाट ब्युँझाइदिओस्। ताकि, दुर्व्यवहारको दुःस्वप्नबाट उनले चाँडै छुट्कारा पाऊन्।
तालिमप्राप्त बेन्ट्लेले ग्रेसलाई कहिल्यै निराश पारेन।
ग्रेस मस्त निदाउँदा बेन्ट्ले छेउमा कुरेर बस्छ। मध्यरात जब उनी सपनामै बड्बडाउन थाल्छिन्, यौन दुर्व्यवहारको मानसिक र शारीरिक पीडाबाट उम्किन हातखुट्टा चलाउँछिन्, तब बेन्ट्ले खाटमा उक्लिन्छ। ऊ ग्रेसको गाला चाट्छ। कहिले सिरक तान्छ, कहिले उनको हात।
ग्रेस झस्किँदै ब्युँझन्छिन्। र, आफ्नो 'प्यारो' साथी बेन्ट्लेलाई कसिलो र न्यानो अंगालोमा बाँध्छिन्।
ग्रेसलाई सपनामा आएर तर्साउने उनकै ओलम्पिक डाक्टर लरेन्स जी. नासार हुन्, जसलाई हाम्रो समयको 'सबभन्दा खतरनाक' यौन दुराचारी मानिन्छ।
कलेज पढ्दा ग्रेसले क्लासिकल नृत्यको तालिम लिएकी थिइन्। उनी बिरामी हुँदा डा. नासारले उपचार गर्ने बहानामा पटक–पटक यौन दुर्व्यवहार गरेका थिए।
त्यति बेला उपचार क्रममा जे भयो, त्यो यौन दुर्व्यवहार थियो भन्ने ग्रेसले दुई वर्षअघि मात्र चाल पाएकी हुन्, जब उनीजस्तै दर्जनौं महिलाले नासारविरुद्ध उजुरी दिए र आफूमाथि भएको दुर्व्यवहार खुलस्त पारे।
डा. नासार यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा जेलमा छन्। झन्डै दुई दशकसम्म अनगिन्ती महिलाहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै अमेरिकी अदालतले यही जनवरी २४ मा उनलाई आजीवन कारावास सजाय सुनाएको हो।
ग्रेसले नासारमाथि अदालतमा भइरहेको सुनुवाइ अनलाइनमा हेरेकी थिइन्।
थुप्रै महिलाले अदालतमा उभिएर यौन दुर्व्यवहारको घटना विस्तार लगाउँदा ग्रेसलाई यस्तो लाग्यो, मानौं उनी आफ्नै कथा सुनिरहेकी छन्।
पुराना घटना सिनेमाको 'फ्ल्यासब्याक' जस्तो एकपछि अर्को आँखाअगाडि नाच्न थाले।
यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै आजीवन कारावास सजाय भोगिरहेका डाक्टर नासार।
विस्मृतिको अँध्यारोबाट नासार 'भूत' जस्तै प्रकट भए। उनको डरलाग्दो अनुहार सम्झेर ग्रेस झस्किइन्।
नासार हरेक रात ग्रेसको सपनामा आउन थाले। उनी उपचारको बहानामा सानी ग्रेसका अंगप्रत्यंग मुसार्थे। ग्रेसलाई अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। उनी लाज र डरले चिसो हुन्थिन्। हातगोडा जड हुन्थे। छाती र तिघ्रातिर चलमलाइरहेका नासारका हात झट्कारेर उनी कोठाबाट भाग्न चाहन्थिन्। तर, त्यसरी भाग्नु सही हो कि होइन भन्ने उनलाई थाहा थिएन।
उनलाई त यो पनि थाहा थिएन, डाक्टर नासारले त्यसरी शरीरका संवेदनशील अंगहरू छुनु सही हो कि होइन?
'उनी त मेरो उपचार पो गर्दै छन्,' उनी सोच्थिन्, 'डाक्टरले बिरामीलाई छुनु ठिकै होला। सबैले यसरी नै छुन्छन् होला।'
यही सोचेर जतिसुकै अप्ठ्यारो र घिन लागे पनि ग्रेस मूर्तिवत् चुपचाप बसिरहन्थिन्।
अदालतमा उभिएका ती महिलाहरूको मुखबाट यौन दुर्व्यवहारको वृत्तान्त सुनेपछि ग्रेस झन् बढी अत्तालिइन्। जुन घटना सम्झेर डराउँदै, लजाउँदै, सिकसिकाउँदै उनले यतिका वर्ष यसै बिताइन्, त्यो त यौन दुर्व्यवहार पो रहेछ!
उनी थाहै नपाई दुर्व्यवहारको शिकार भएकी रहिछन्!
जबसम्म कुनै घटनाको अर्थ थाहा हुन्न, त्यसलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ। जब त्यो सामान्य होइन भन्ने चेत खुल्छ, तब त्यसले हामीलाई असामान्य बनाइदिन्छ।
ग्रेसलाई त्यस्तै भयो।
आफू पनि यौन दुर्व्यवहारको शिकार भएको चाल पाएपछि ग्रेसलाई हरेक रात नासारको 'भुत'ले तर्साउन थाल्यो। पुराना घटनाको दुःस्वप्नले उनलाई पछ्याउन थाल्यो। उनको निद्रा बिथोलियो।
उनले आँखा झिमिक्कै नगरी कयौं रात काटिन्। रातभरि कोठामा जागा बसेर दिनभरि कक्षामा एकाग्र हुन उनलाई हम्मे पर्थ्यो। उनले आफ्नो नाचमा पनि ध्यान दिन सकिनन्।
त्यही बेला वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूका कुकुरलाई तालिम दिने व्यक्तिसँग उनको भेट भयो। ती व्यक्तिले उनलाई दुःस्वप्नबाट बाहिर आउन कुकुरलाई साथी बनाउने सल्लाह दिए।
ग्रेसलाई सल्लाह मन पर्‍यो।
उनले दुःस्वप्नबाट जोगाउने साथीका रूपमा बेन्ट्ले छानिन्। दुःस्वप्नले छट्पटाइरहेको मान्छेलाई कसरी निद्राबाट ब्युँझाउने भनेर तिनै व्यक्तिले बेन्ट्लेलाई तालिम दिए।
'म सधैं कुकुर पाल्न चाहन्थेँ,' ग्रेसले आफू सानो हुँदा घरमा पालेको कुकुर सम्झिइन्, 'म कुकुरसँगै खेलेर हुर्किएकी हुँ।'
'आज मेरा कहालिलाग्दा अँध्यारा रातहरूमा साथ दिने यही कुकुर भएको छ,' उनले भनिन्।
ग्रेसले पहिलोपटक नासारलाई भेटेको सन् २००७ मा हो। उनी १२ वर्षकी थिइन्। स्कुलमा खेल्दा नाडी मड्किएर उनी नासारकहाँ उपचार गर्न गएकी थिइन्।
ख्यातिप्राप्त प्राध्यापक तथा मिसिगन स्टेट युनिभर्सिटीका डाक्टर नासार अमेरिकी जिम्न्यास्टिक राष्ट्रिय टिम तथा ओलम्पिक टिमका आधिकारिक चिकित्सक थिए।
ग्रेस त्यति बेला 'ब्याले' सिक्दै थिइन्। उनलाई नाचको सौन्दर्य र कलासँग लगाव थियो।
जब उनी नासारलाई भेट्न गइन्, उनको अफिस कोठामा भित्ताभरि ओलम्पिक खेलाडीहरूको तस्बिर झुन्डिएको देखेर दंग परिन्। गलामा ओलम्पिक मेडल पहिरिएर अनुहारमा मुस्कान छरिरहेका ती खेलाडीका तस्बिरले उनलाई प्रेरित गर्थ्यो।
'मेरो तस्बिर पनि उनको कोठामा त्यसै गरी टांगियोस् भन्ने म चाहन्थेँ,' ग्रेसले भनिन्।
उनले आफ्नो किशोरावस्थाभरि हरेक चोटपटकको उपचार डा. नासारबाटै गराइन्।
उपचार क्रममा नासारको हाउभाउ र उनको हातको हरकतले ग्रेसलाई अप्ठ्यारो महशुस हुन्थ्यो, तर उनले अविश्वास गरिनन्। एक ओलम्पिक डाक्टरले खराब नियत राखेर आफ्नो शरीरसँग खेलिरहेका होलान् भन्ने ग्रेसलाई कल्पनासम्म भएन।
'म कुनै दिन कुशल नर्तकी हुन चाहन्थेँ,' उनले भनिन्, 'यसको निम्ति मलाई स्वस्थ राख्न डा. नासार मद्दत गर्दैछन् भन्ने मैले सोचेँ।'
उनीजस्तै अरू थुप्रै केटीहरूले यस्तै सोचेका थिए। डाक्टरले नै आफ्नो यौन दुर्व्यवहार गरेका होलान् भन्ने उनीहरूले पनि कल्पना गरेका थिएनन्। कतिले शंका मान्दै आफ्ना प्रशिक्षक, परामर्शदाता र प्रहरीलाई भने। तर, कसैले उनीहरूका कुरा पत्याएनन्।
यसैबाट प्रेरित भएर नासारले आफ्नो वरिपरिका अनगिन्ती केटीहरूको यौन दुर्व्यवहार गरे। कतिलाई त उनी अभिभावकहरूकै सामु दुर्व्यवहार गर्थे।
उनको एउटा विशेष तरिका थियो। उनी आफ्नो उपचार कक्षमा अभिभावकहरूलाई पनि राख्थे। ती अबुझ अभिभावकसँग कुराकानी गर्दागर्दै उनी तिनको आँखा छलेर छोरीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्न भ्याउँथे।
ती सबै हरकत आफ्नै आमाबाबुका अगाडि भइरहेकाले छोरीहरूलाई पनि ठिकै होला भन्ने लाग्थ्यो।
'आमाबाबुकै अगाडि उनी मलाई यताउति छोइरहेका हुन्थे,' ग्रेसले भनिन्, 'उनको छुवाइ गलत हो भने आमाबाबुले पक्कै प्रतिरोध गर्लान् भन्ने मलाई लाग्थ्यो। प्रतिरोध नगरेपछि ठिकै होला भन्ने सोच्थेँ।'
बेन्ट्लेलाई आफूसँग ल्याएपछि उनी पनि कुकुर प्रशिक्षकसँगै बसेर तालिम दिन थालिन्। राति दुःस्वप्नले छट्पटाउँदा उनको शरीरमा कस्तो–कस्तो हाउभाउ देखिन्छ भनेर बेन्ट्लेलाई सिकाइन्। ताकि, ती हाउभाउ बुझेर बेन्ट्लेले उनलाई झकझकाउँदै निद्राबाट ब्युँझाइदिओस्।
'यसको निम्ति म निद्रामा कहालिएको अभिनय गर्थें,' उनले भनिन्, 'बेन्ट्लेले मेरो अभिनय हेरेर कुन बेला मलाई ब्युँझाउनुपर्छ भन्ने सिक्यो।'
छ महिनाको तालिमपछि बेन्ट्ले तयार भयो। हरेक रात ग्रेस निद्रामा छँदा बेन्ट्ले उसलाई पहरा दिन थाल्यो।
विस्तारै ग्रेसको दुःस्वप्न हराउँदै गयो।
यसबीच बेन्ट्लेले ग्रेसका अन्य मानसिक तनावका लक्षण पनि चिन्न थाल्यो। ती प्रत्येक लक्षण देखिँदा ऊ ग्रेसलाई मद्दत गर्न अघि सर्थ्यो।
'म कुन बेला तनावमा छु, कुन बेला छट्पाउँदैछु भनेर बेन्ट्ले सजिलै बुझ्छ,' ग्रेसले भनिन्, 'बेन्ट्ले त्यस्तो बेला मेरो नजिक आएर बस्छ र मेरो तनाव कम नहुञ्जेल मलाई साथ दिन्छ।'
बेन्ट्लेले पनि ग्रेसको काख चिनेको छ।
जब उनी बेन्ट्लेलाई आफ्नो काखमा आएर बस भन्छिन्, ऊ खुर्रर गएर बस्छ। ग्रेस उसलाई कसिलो अंगालोमा बेर्छिन्।
यही कुकुरको मद्दतले ग्रेस अचेल धेरै हदसम्म तनावमुक्त रहन थालेकी छन्। सानो उमेरमा भोगेको यौन दुर्व्यवहारको दुःस्वप्नबाट मुक्त भएकी छन्। पछिल्लो दुई वर्षदेखि आफ्नो 'प्यारो' साथीको साथमा नयाँ जीवन बाँचिरहेकी छन्।
यति मात्र होइन, उनी अचेल केटीहरूलाई यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध जागरुक बनाउने अभियानमा समेत सक्रिय छिन्।
'डाक्टर नासारको डरलाग्दो सपनाले मलाई लामो समय पछ्यायो। अब म त्यसबाट मुक्त भएर अघि बढेकी छु,' उनले भनिन्।
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ११, २०७६, ०६:३६:००